မျှော်လင့်ချက် ..ရည်မှန်းချက် …အနာဂတ်ဆန္ဒ နဲ့ အာသီသများ ။ အဲဒီ့ အချင်းအရာတွေကို ဗေဒင်ပညာမှာ ဘယ်အရာနဲ့ ဖော်ပြထားပါသလဲ။ ဌာန တစ်ခုခုနဲ့လား၊ အတန့် ဘာဝ တစ်ခုခုနဲ့လား။ လက်ဖ၀ါးပေါ်က အရေးအကြောင်းတွေနဲ့လား ၊ ဂြိုဟ်သဘာဝ တစ်ခုခုနဲ့လား ။ အဆိုပါ …မျှော်လင့်ချက် ..ရည်မှန်းချက် နဲ့ အနာဂတ် ဆန္ဒများ ပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်ရခြင်း သို့တည်းမဟုတ် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရခြင်း ..ဆိုတာ ကရော….ဘယ်လိုတွက်လို့ ….ဘယ်လိုခန့်မှန်းကြည့်လို့ ရနိုင်ပါသလဲ…။ ကျွန်တော့်အယူအဆ အရ…..အောက်ပါအချင်းအရာတွေကို သာ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်………………………….။
Posted by Sayarphone at 10:47 PM Labels: မဟာဘုတ်
နာမည် လှလှ ရွေးရအောင်
လူတော်တော်များများ …နာမည်လာရွေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အချို့က ….ရင်နှစ်သည်းချာ သားသမီး ငယ်လေးတွေ အတွက်၊ အချို့က …မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် …၊ အချို့က …မကြာမီ လုပ်ကိုင်တော့မယ် … လုပ်ငန်း အတွက် ၊ တစ်ချို့က တော့…. ကိုယ်သုံးမယ့် အနုပညာနာမည်အတွက် စသည်ဖြင့် ဆိုပါတော့။
Posted by Sayarphone at 9:39 PM Labels: နာမည်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ပန်းခြံထဲတွင် ကျွန်တော် ထိုင်နေပါသည်။ ကလေးမလေးတစ်ယောက်နှင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့် ရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ကြက်တောင်ရိုက် ကစားနေကြသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ချင် လာသော်လည်း …အားနာသဖြင့် …လိမ္မော်ရနံ့ငုံဆေးပြားလေးသာ ကျွန်တော် ငုံထားလိုက်ရသည်။
ခပ်ငယ်ငယ် ခပ်ချောချော တရုတ်အမျိုးသား လူငယ်လေးတစ်ယောက်နှင့် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဆီကို စူးစမ်းသော အကြည့်ဖြင့် …တည့်တည့်လျှောက်လာသည်ကို မြင်ရသည်။ အနားရောက်တော့…..ကောင်လေးက ဤသို့ မေး၏။
Posted by Sayarphone at 9:45 PM Labels: ကျွန်တော့် အတွေးအမြင် , မဟာဘုတ်
ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းနှင့် မဟာဘုတ်ရှုထောင့် အမြင်
အရင်းအနှီး (၀ါ) ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဆိုတာကို မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာမှာ နေ့နံ အသီးသီး အလိုက် အောက်ပါဂြိုဟ်တွေက သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။
Posted by Sayarphone at 9:43 PM Labels: မဟာဘုတ်
ချစ်မေတ္တာ အထောက်အကူ ပြု စာစုများ (၁)
တွေ့သမျှ မြင်သမျှ က ချစ်နိုင်ကြသည့် မောင်မောင် မမ ၊ ကိုကို ၊ ပျိုပျို များ ဖြစ်နေကြသည်။ ညနေ အလုပ်သိမ်းချိန် ရောက်၊ ခဏတစ်ဖြုတ် နား ၊ ရေမိုးချိုး ၊ စားရေးသောက်ရေးကဏ္ဍလုပ်။ ပြီးသည်နှင့် အိပ်ယာလေးများပေါ် မှောက်လျှက် တစ်ဖုံ၊ ငုတ်တုတ်တစ်သွယ်၊ အသီးသီး ချက်တင် (chatting) ၀င်ကြတော့သည်ကို ကျွန်တော် မြင်နေရသည်။
သြော် သည်အချိန်လေးပဲ အပန်းဖြေ ၊ အလွမ်းပြေ၊ စခန်းဖွေလို့ နားကြရသည်သာ။
Posted by Sayarphone at 5:18 PM Labels: ချစ်မှုရေးရာ အဖြေရှာ
(၁) နာမည်အဖျားစာလုံး ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုနံ (ယ၊လ၊၀၊ရ) ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသော အမည်ရှင်များ
ဥပမာအားဖြင့် ….(ခင်ခင်ဝေ၊ သဉ္ဇာယွန်း၊ နှင်းနှင်းလွင် ၊ ချစ်သုဝေ၊ ထွန်းလင်း)
အထက်ပါကဲ့သို့သော အမည်ရှင်တွေအဖို့ လက်ရှိရောက်ဆဲ မြန်မာကောဇာခုနှစ် ၁၃၇၄ ခုနှစ် ထဲမှာ …..
Posted by Sayarphone at 6:01 PM Labels: နှစ်စဉ်ဟောကိန်းများ
နာမည်သည် လူ၏ ကံတရားကို မဖန်တီး ။ သို့သော် ရှေ့ဖြစ်လာမည့် အကျိုးဆက် တို့၏ အကြောင်းတရား ပုံရိပ်များ ထင်ဟပ်နေကြ၏။
Posted by Sayarphone at 10:11 PM Labels: ဗေဒင်သင်တန်း , ဗေဒင်မေးကြမယ်ဆိုရင်
ပထမ ဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ …. ၁၃၇၄ ခုနှစ် ခုနှစ်သားသမီးများ ကံဇာတာကို အရင်ဖတ်ပါ။ ပြီးတဲ့နောက်မှာမှ ….ဒီဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ နာမည်ဆိုင်ရာ ဟောကိန်းများကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့…။
Posted by Sayarphone at 10:46 PM Labels: နှစ်စဉ်ဟောကိန်းများ